NextMapping | भविष्य कसरी तयार हुने - अम्बर म्याकको साथ अन्तर्वार्ता
चेरिल क्रान: आज म साँच्चिकै उत्साहित छु, अम्बर म्याकलाई हाम्रो पाहुनाको रूपमा लिनको लागि। एम्बर कृपया हाम्रो ग्राहकहरूको साथ तपाईंको पृष्ठभूमि साझा गर्नुहोस्।
एम्बर म्याक: धन्यवाद, म लगभग २० बर्षदेखि टेक्नोलोजी उद्योगमा काम गर्दैछु। मैले सान फ्रान्सिस्कोको टेक स्टार्टअपहरूको एक जोडीमा झारमा जान सुरु गरें। मसँग एक पत्रकारिता डिग्री छ, त्यसैले म सँधै टेक्नोलोजीमा रिपोर्ट गर्नमा रुचि राख्छु। र सौभाग्यवश मैले प्रसारण मिडियामा टेक्नोलोजी रिपोर्टर र विभिन्न टेक्नोलोजी कार्यक्रमहरूको संख्याको होस्ट बन्ने ठूलो अवसर पाएको छु। म टेक्नोलोजीको बारेमा दुई पुस्तकहरुको लेखक हुँ, र टेक्नोलोजी, नवीनता, कृत्रिम बुद्धिमता लाई अनुकूलन गर्दैछु।
चेरिल क्रेन: हाम्रो ग्राहकहरु तपाइँको ज्ञान र तपाइँको परिप्रेक्ष र टेक्नोलोजीमा तपाइँको विशेषज्ञता सुन्न चाहान्छन्। पहिलो प्रश्न, तपाईंको विचारमा, कसरी डिजिटल रूपान्तरण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गर्न सक्षम हुँदैछ? उदाहरण को लागी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, Ai, कि मा तपाइँको परिप्रेक्ष्य सुन्न मनपर्नेछ।
एम्बर म्याक: नयाँ प्रविधिमा अनुकूलन हुने सन्दर्भमा धेरै व्यवसायहरूसँग अहिले के भइरहेको छ भन्ने छ कि व्यवसायहरू पहिलेको भन्दा धेरै सचेत छन्। तिनीहरू जान्दछन् कि उनीहरूलाई अनुकूलन गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, र त्यो कि कामको भविष्य परिवर्तन हुँदैछ र यो हामी मध्ये कसैले कल्पना गरेको भन्दा छिटो परिवर्तन हुँदैछ। वास्तवमा, म ग्राहम वुडबाट उद्धरण साझा गर्न चाहन्छु जहाँ उनी भन्छन कि परिवर्तन पहिले कहिल्यै यत्तिको चाँडो भएको छैन र यो कहिलेसम्म ढिलो हुनेछैन। र यो हामी सबैको लागि केवल एउटा रिमाइन्डर हो कि हामी आगामी to देखि १० वर्षमा प्रवेश गर्छौं जहाँ हामी निरन्तर रूपान्तरण हुनुपर्दछ। त्यसोभए, मैले भनेझैं शुभ समाचार यही हो कि व्यवसायहरूले अन्ततः यो महसुस गर्छन् कि उनीहरूको टाउको बालुवामा हुँदैन। अर्कोतर्फ, तिनीहरू मध्ये धेरै केवल चाँडै पर्याप्त रूपान्तरण छैन।
चेरिल क्रान: हो, म तपाईंसँग पूर्ण सहमत छु। मेरो मतलब नेक्स्टमैपिंग कोरोबोरेट्समा रहेको हाम्रो अनुसन्धान हो कि नेताहरू जान्दछन् कि उनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्दछ र अझै 'कसरी' भविष्यको लागि तयार हुन संघर्ष गरिरहेको छ।
मेरो अर्को प्रश्न2अंश प्रश्न हो।
प्राविधिक वास्तविकतामा अझ छिटो अनुकूल हुन कम्पनीहरूले अब के गर्न सक्दछन्?
रोबोटिक्स र स्वचालनले कसरी प्रभाव पार्छ व्यवसाय र कम्पनीहरूको लागि जुन त्यो अग्रणी धारमा छैनन्, के, त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छन् भनेर तपाइँको विचार के छ?
एम्बर म्याक: व्यवसायलाई नयाँ टेक्नोलोजीमा अनुकूल बनाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू सिक्नको लागि पहिलो संस्कृति हो। हामीले त्यहाँका नेताहरूको सल्लाह देख्यौं माईक्रोसफ्टबाट सत्य नाडेला जस्ता। तपाईंलाई थाहा छ कि हामी स्थान र मानसिकतामा निरन्तर रहनु पर्छ जहाँ हामी नयाँ स्थानका बारे सिकेका छौं। जब हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अटोमेसनको युगमा अनुकूलन गर्ने कुरा गर्छौं, मैले दिन सक्ने उत्तम सल्लाह भनेको यी कृत्रिम बुद्धिमताद्वारा चालित नयाँ उपकरणहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नु हो जुन संसारमा अवस्थित छ। सायद तपाईंले यो पनि महसुस गर्नुभएन कि तपाईंले उनीहरूमध्ये केही प्रयोग गरिरहनु भएको छ, चाहे यो स्मार्ट वक्ता हो, हुनसक्छ तपाईं गुगल सेवाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन कृत्रिम बुद्धिमताद्वारा चालित छन्, तर ती उपकरणहरूले कसरी काम गर्दछन् भन्ने कुरा बुझ्न थाल्नुहोस्। त्यस बिन्दुबाट, तपाईले आफ्नो व्यवसायमा उपकरण परिचय दिन अवसरहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ग्राहक सेवाको व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने, यस्तो हुन सक्छ कि तपाईं च्याट बोटको परिचय दिन चाहानुहुन्छ र कुराकानीको बोट विकास गर्न सुरु गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको ग्राहकहरूसँग कसरी सञ्चार गर्ने भन्ने बुझ्दछ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो नयाँ टेक्नोलोजीको केही अप्टोमा रूपमा बच्चाको चरणहरू लिने बारे हो। तर मलाई लाग्छ कि तपाइँ यस बारे सिक्ने शर्तमा धेरै चाँडो सार्न पर्छ।
चेरिल क्रान: यो एक राम्रो बिन्दु हो। मेरो मतलब, मलाई लाग्छ, तपाइँलाई थाहा छ, क्लाउड र BYOD (तपाइँको आफ्नै उपकरण ल्याउने) सामान्य हुने बित्तिकै, अब नेताहरूले सोध्नु पर्छ, के हामीसँग निर्माण गर्न चाहेको व्यापारलाई समर्थन गर्न सही टेक्नोलोजी छ?
एम्बर म्याक: मलाई लाग्छ कि यो धेरै ब्यापारहरूको लागि मुद्दा हो, विगत दुई दशकहरूमा उनीहरू नयाँ प्रविधि अपनाउन ढिलो भए। धेरै कम्पनीका नेताहरू परिवर्तन र डरलाग्दो टेक्नोलोजीहरू राख्नको लागि डराउँछन्। तर मलाई लाग्छ के स्पष्ट छ कि अनुकूलन गर्न सक्ने व्यावसायहरु केहि अर्को वर्षहरु मा वास्तव मा फल्छ। र दुर्भाग्यवश, ती व्यवसायहरू जुन गर्दैनन्, ती त्यसो भइरहेका छैनन् जस्तो कि उनीहरू निरन्तर अस्तित्वमा रहन सक्छन्। म ती धेरै जसो धेरै व्यापारको भाग्यको बारेमा धेरै चिन्ता गर्छु, विशेष गरी अर्को next बर्षमा।
चेरिल क्रेन: म तपाईंसँग पूर्ण सहमत छु हामी एक मात्रता विश्वविद्यालयको तथ्या c्क उद्धृत गर्दछौं कि वर्तमान भाग्य 40०० को 500०% आउँदो १० बर्षमा अवस्थित छैन। यो वास्तविक चिन्ताको विषय हो कि वाक्यांश परिवर्तन वा मर्नुहोस् आजको भन्दा बढी प्रासंगिक कहिल्यै भएको छैन। जुन तपाईको कामको एक धेरै हो, यसले संस्थालाई टेक्नोलोजी उपकरणका बारे सचेत रहन कर्भको अगाडि रहन र प्रतिस्पर्धी रहन,
67% कम्पनीहरू डिजिटल परिवर्तनको साथ संघर्ष गर्दैछन्। तपाई हामीलाई राय दिन सक्नुहुन्छ किन तपाईलाई लाग्छ कि यो केस हो?
एम्बर म्याक: व्यवसायहरू डिजिटल रूपान्तरणको साथ संघर्ष गरिरहेका छन् र यो किनभने त्यहाँ नेतृत्व र संस्कृति समस्या छ। हामी धेरै व्यावसायहरूमा देख्छौं, तपाईंलाई थाहा छ, यो प्रविधिको व्यवसायको साथ विशेष गरी साँचो हो, कि तिनीहरू केहि तरिकाहरूमा शीर्ष मा अहंकारको संस्कृति हो। र के भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा यो हो कि तिनीहरू केवल ती पाउँदछन् कि उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सबै भन्दा राम्रो चीज हो जुन उनीहरूले त्यतिबेला गरिरहेका थिए। र त्यो कि उनीहरूको टेक्नोलोजी वा तिनीहरूको सेवाहरू वा तिनीहरूका उत्पादनहरू उत्कृष्ट छन्। तर उनीहरूले के बुझेका छैनन् भन्ने छ कि त्यहाँ संसारको कुनामा एउटा स्टार्टअप हुन सक्छ कि तपाईं त्यससँग परिचित हुनुहुन्न, उह, धेरै पैसा छैन तर धेरै उत्सुक र त्यहाँ काम गरिरहेका एक उज्यालो व्यक्ति छन्। जो उद्योग अवरोध गर्न को लागी तयार छन्। र हामी अहिले टेक्नोलोजिकल परिवर्तनको गति र यत्तिको छिटो विकास गर्न सक्षम हुनुको कारण के देख्दैछौं भने यो हो कि तपाईंलाई अर्को खतरा कहाँबाट आउँदैछ भनेर थाहा छैन। र त्यस अवस्थामा म एक नेतृत्व र संस्कृति दृष्टिकोणबाट सोच्दछु, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि तपाईंले यो सबै थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ, अँगाल्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं केही पनि सिक्न सक्नुहुन्छ।
चेरिल क्रेन: मलाई मन पर्छ कि तपाईंले चुनौतीको एक हिस्सा भनेको कार्यकारी अहंकार हो। मलाई लाग्छ कि हाम्रो अनुभवमा परिवर्तन कार्यकारी तहमा हुनु पर्छ र तिनीहरूले यथास्थितिमा रहनुको सट्टा परिवर्तनहरू गर्ने महत्त्व देख्दछन्। प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सम्बन्धमा परिवर्तन प्रासंगिक रहन आवश्यक छ। प्रविधि आविष्कार र सहस्राब्दी भर्तीहरू बीच जेनेड जेडको सिधा सम्पर्क छ। तिनीहरू नयाँ टेक्नोलोजिकल उपकरण भएका कम्पनीहरूको खोजीमा छन् जसले गर्दा उनीहरू अझ राम्रो काम गर्न सक्दछन्। भर्ती र प्रतिभालाई कायम राख्ने उच्च प्रविधि समाधानको साथ कम्पनीहरूसँग जोडिएको छ साथसाथै परिवर्तनको नेतृत्व गर्न इच्छुक गतिशील नेतृत्व।
एम्बर म्याक: गत वर्ष मैले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा एउटा श्रृंखला आयोजना गरें जसलाई एआई प्रभाव भनिन्छ। र हामीले विभिन्न उद्योगहरूमा व्यक्तिगत एपिसोडहरू गर्‍यौं। र मैले वास्तवमा कस्तो हानी गर्‍यो जब हामीले त्यो शो बनाइरहेका थियौं र व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिरहेको थियो कि यदि तपाइँ कृषि जस्ता उद्योग लिनुहुन्छ भने, यो त्यस्तो उद्योग हुन सक्छ जहाँ मानिसहरू त्यस ठाउँमा काम गर्छन्, तपाईलाई थाहा छ, तिनीहरूले त्यो पुस्तामा पुस्तासम्म काम गरेका छन। , तपाइँलाई थाहा छ, परिवारहरू खेतमा पार गर्दैछन्। र मैले यो अन्तर्वार्ता लिएका कम्पनीहरू मध्ये एकको सर्तमा मलाई चाखलाग्दो भयो, हामीले अन्तर्वार्ता लिएका एक कम्पनीले टेक्नोलोजी विकास गरिरहेको थियो जसले दुधको गुणस्तर सुधार गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्दछ। यी व्यक्तिहरू, तिनीहरूसँग कृषिमा अनुभव छैन, तर तिनीहरू डाटा मन पराउँछन्। तिनीहरू आफैलाई डेटा नर्डहरू भन्छन् र उनीहरू समस्याहरू समाधान गर्न मन पराउँछन्। र त्यहाँ एक राम्रो उदाहरण तपाईको व्यवसाय वा उद्योगलाई यो खतरा नबुझ्नु हो किनभने सम्भाव्यताको कारण र पहुँच उपलब्ध छ सबैलाई वास्तवमा एक फरक पार्नको लागि।
चेरिल क्रान: यो उद्योगको बाहिरबाट आउने समाधानहरूको उत्कृष्ट उदाहरण हो। मिलेनिया र जेन जेड समाधानहरू सिर्जना गर्न चाहन्छ र डाटा लिभेर गर्ने तिनीहरूको चाहनाको आधारमा सजिलै कुनै पनि उद्योगलाई व्यवधान गर्न सक्दछन्। यो त्यस्तो प्रतिस्पर्धा मात्र तपाईको उद्योग भित्र रहेको थियो। अब खतराहरुमा नयाँ टेक्नोलोजी र कोही त्यस्तो टेक्नोलोजी संग आउँछ जसले पानीको बाहिर अरू सबै चीजहरू उडाउँछ।
हाम्रो धेरै अनुसन्धानले देखाउँदछ कि नेताहरू र टोलीहरू प्रविधिको लाभ उठाउन चाहन्छन् तर समयको अभाव छ। यसमा कुनै विचारहरू?
एम्बर म्याक: मँ, मलाई लाग्छ कि हाम्रो भविष्यमा हामीले सामना गर्ने ठूलो मुद्दाहरूमध्ये एउटा त्यो हो- हामी सबै समयको कमी छौं र मलाई लाग्छ कि वास्तवमा आज के हुँदैछ र सफल कम्पनीहरूको बारेमा खण्डहरू बोल्दछु। यदि तपाईं आज विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात कम्पनीहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, तिनीहरू सबैको उमेरको जस्तो छन्। व्यक्तिहरूको समय बचत गर्ने समाधानहरू। र त्यसोभए यो ती व्यक्तिहरू र संगठनहरूका बारे हो जुन समय व्यवस्थापन बुझ्छन् र कसरी उनीहरूको अधिकतम समय लिन्छन्। र यो जरूरी छ कि अब अधिक काम को बारे मा छैन, तर यो होशियार काम को बारे मा हो। र त्यो व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ कदर गर्न सुरू गर्नु भनेको भनेको चीजहरूमा समय खर्च गर्नु हो जुन वास्तवमा तपाईको व्यवसायमा फरक पार्दै गइरहेको छ अन्य कारकहरू र चीजहरूमा केन्द्रित गर्नुको सट्टामा जुन तपाईंको व्यवसाय बाहिर भइरहेको छ र तपाईंको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित छ, तर वास्तवमै बुझ्ने तपाईंको कदम चाल्ने व्यापार ध्यान रणनीतिक पign्क्तिबद्धतामा हुनु आवश्यक छ। टेक्नोलोजी रणनीतिक उद्देश्यहरूमा मिलान गर्दै।
मैले भनेको छैन कि तपाईंले आफ्नो प्रतिस्पर्धा वा सम्भावित खतराहरूमा ध्यान दिनु हुँदैन। नेताहरू के भइरहेको छ भनेर सजग हुनुपर्दछ, तर मलाई लाग्दैन कि तपाइँ प्रतिस्पर्धाको पछि लाग्नु पर्छ। तपाईले आफ्नो मार्ग बनाउनुपर्दछ र दिशा पत्ता लगाउनु हुन्छ जुन तपाईं जानु हुँदैछ। सहि। यो हो ती, ती व्यक्तिहरू र व्यवसायहरू जुन मलाई लाग्छ हो भविष्यमा सबैभन्दा सफल हुन गइरहेको। हो र तपाइँलाई थाहा छ, धेरै पटक तपाईंको उद्योगको बाहिर हेर्नु भनेको भित्र हेर्नु भन्दा धेरै नवीन हुन्छ।
चेरिल क्रान: मलाई लाग्छ तपाईले भनेको कुरा ठीक हो। तपाईं र म एकै समय पछि नै कार्यक्रम चलाउँछौं र तपाईं सोशल मिडियाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ र कसरी व्यवसायहरू र नेताहरूले यसको लाभ उठाउन आवश्यक पर्दछ।
के कम्पनीहरू अब सोशल मिडियामा राम्रो छन्?
एम्बर म्याक: तपाईंसँग सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू भएता पनि, तपाईंसँग उत्तम सेवाहरू भएता पनि, जब कसैले तपाईंलाई अनलाइन भेट्न जान्छ, र यो विशेष गरी अर्को पुस्ताको लागि सही हो, यदि तिनीहरूले तपाईंको वेबसाइट वा तपाईंको सोशल मिडिया च्यानलहरू बाहिर छन् भनेर देख्दछन्। मिति को र नवीनतम जानकारी संग अप टु डेट छैन र तपाईं त्यो ठाउँ मा एक विचार नेता हुन देखिन्छ, संभावना तिनीहरू टाढा देख्न सक्छ र अचानक, तपाईं यो प्रासंगिकता टुक्रा हराउनु भयो कि गर्न को लागी यति महत्वपूर्ण छ आज सफलता। एक महान, त्यसैले एक व्यापार दृष्टिकोणबाट पारंपरिक व्यवसाय को एक धेरै जस्तै हुन्छन्, तिनीहरू चाहन्छन्, तिनीहरूले यस कारण म प्राप्त गर्न को लागी विनियमहरू, सही हो? र प्रतिबन्धहरू। त्यसैले हामी सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्न सक्दैनौं, तर त्यो परिवर्तन भयो। त्यसोभए धेरै संस्था वास्तवमै माथि उत्रिरहेका छन्। मेरो विचारमा तपाईंले बताउनुभएको मुख्य कुरा प्रभावी ढ communicate्गले सञ्चार हुन्छ किनकि मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै शोर छ, तर, तर यो तपाईको ब्रान्डलाई सन्देशको साथ संरेखित पार्दैछ जुन तपाईको बारेमा कुरा गर्दा तपाईले वास्तवमै कुराकानी गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
चेरिल क्रान: हो। मलाई लाग्छ कि यो त्यस्तो चीज हो जुन व्यवसायहरूले बुझ्नु पर्छ कि तपाईंले प्रभावकारी रूपमा कुराकानी गर्न सिक्नुपर्दछ र कुन प्लेटफर्महरू तपाईंको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने जान्नुपर्दछ। लिंक्डइन प्लेटफर्मको रूपमा लिked्कइनमा सामग्री सिर्जना गर्ने ठूलो अवसर हो, यो भिडियो सामग्री होस् वा लेख लेख्नुहोस् जुन तपाइँ प्रासंगिक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आफैंमा स्थिति राख्न सक्षम हुन। र अझै धेरै व्यवसायहरू केवल समय वा पैसा लगानी गर्दैन वास्तवमा टेक्नोलोजी टेक्नोलोजीमा वेबसाइट र सोशल मिडिया सहित परिवर्तनको अग्रणी किनारा हुनको लागि।
एम्बर म्याक: हो, म तपाईंसँग पूर्ण सहमत छु। र मलाई लाग्छ कि त्यहाँको कुञ्जीले तपाईंको लक्षित श्रोतालाई चिन्ने छ। मलाई लाग्छ कि व्यक्तिहरू आज सोशल मिडियामा के गर्छन् ती सबै प्लेटफर्महरूमा हुन खोज्नुको सट्टामा वास्तवमै शून्य बनाउनु भनेको उनीहरूको विशिष्ट व्यवसायका लागि लगानीमा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिफल के हो भनेर।
चेरिल क्रेन: केहि नयाँ प्रविधिहरू आउँदैछन् जुन हाम्रो काम गर्ने तरिकालाई असर गर्ने छन्? उदाहरण को लागी, मैले तपाईको ब्लग मा फोल्ड योग्य फोन को आइटम देखें।
एम्बर म्याक: मलाई लाग्छ यो साँच्चिकै चाखलाग्दो छ यदि तपाईले हार्डवेयरको दृष्टिकोणबाट सफ्टवेयरको दृष्टिकोणबाट निकट भविष्यमा केही प्रवृत्तिलाई हेर्नुभयो भने विगतका केही वर्षहरूमा त्यहाँ धेरै नयाँ कुरा भएको छैन। तपाईंलाई थाहा छ, फोनहरू वास्तवमा धेरै विकसित भएनन् २०१० सम्म जब त्यहाँ फोल्डेबल फोनहरूका बारेमा सबै कुरा हुन्छन्। फोल्डेबल मोबाइल फोन एकदम विचित्र चीज जस्तो लाग्छ र तपाई कल्पना गर्नुहोस् कि यो कुनै प्रकारको लचिलो र झुकिएको छ, तर तपाईले यसका बारे सोच्नु पर्ने फोन जस्तै गरी ट्याब्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। बहु-प्रयोग मोबाइल उपकरणको अधिक छ किनकि व्यक्ति स्मार्टफोन र ट्याब्लेट बोक्न चाहँदैन।
र मलाई लाग्छ कि यो एक साँच्चै चाखलाग्दो प्रवृत्ति हो जुन केवल बढ्न जारी रहनेछ। र सफ्टवेयर पक्षमा, मलाई लाग्छ कि हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ केहि मनमोहक चीजहरू हेरिरहेका छौं। यदि तपाइँ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जस्ता प्रवृत्तिमा हेर्नुहुन्छ, र त्यो हुन सक्छ, तपाइँलाई थाहा छ, एक स्मार्ट वक्ताबाट सबै कुरा थाहा छ तपाईले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अचानक दुई एआई लाई अनुसंधान कागजातहरूको झुण्ड पढ्न र रिपोर्ट बनाउन सक्षम हुँदै , त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जहाँ एकाएक मेशिनले वास्तवमै बुझ्ने भाषा सुरू गरिरहेको छ जुन हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्छ।
चेरिल क्रेन: नेक्स्टमैपिंगमा हामीले श्रमिकहरूमा रोबोट, स्वचालन, एआईको प्रभावमा धेरै अनुसन्धान गरेका छौं। जस्तै यो कामदारको भविष्य को लागी के मतलब हो?
तपाईको रायमा र तपाईको विशेषज्ञतामा तपाईले रोबोटलाई मानव जागि लिईरहेको देख्नुहुन्छ? तपाईंलाई थाहा छ, हामीले धेरै अनुसन्धान गरेका छौं जुन भन्छु कि होईन, यो सत्य होइन। अधिक रोजगार सिर्जना हुनेछ। तपाईको स्थिति के हो? तपाईंको अनुभव र विशेषज्ञतामा यसमा तपाईंको विचारहरू के हो?
एम्बर म्याक: मलाई लाग्छ यो सुरक्षित छ कि जसले कुनै पनि व्यक्तिले स्वचालनको युगमा कुनै अनुसन्धान गरेको छ र के हुन गइरहेको छ जब काम र रोबोटको भविष्यको कुरा आउँछ भने सहमत हुन्छ कि रोबोटहरू हाम्रो काम लिने जरूरी छैनन्। । वास्तवमा यो मानव र मेशीन साझेदारीको अधिक हुनेछ। हामीलाई धेरै घण्टा लाग्ने चीजहरू र हामी मानवहरू त्यति ठूलो छैनौं, एउटा मेशिनद्वारा गरिन्छ र धेरै तरिकाले सोच्दछ जुन हामीलाई अझ फलदायी बनाउन अनुमति दिनेछ। मानव सहयोगी हुन ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
मेशिनहरूले आज त्यसो गर्न सक्दैन, तर तिनीहरूले एउटा चीज गर्न सक्छन् र एउटा चीज एक तरीकाले स्वचालित गर्न सकिन्छ कि हुनसक्छ मानव यसको लागि रोबोटहरूमा भर पर्न सक्छ। तर मलाई लाग्दैन कि हामी अर्को to देखि १० बर्षमा संसारमा जाँदैछौं जहाँ हामी वास्तवमा रोबोटहरू देख्न सक्छौं जुन शारीरिक रूपमा काम गरिरहेका छन्। जबसम्म यो केहि उद्योगहरू हुन सक्छ जस्तै केहि सेवा आधारित उद्योग सम्भावित रूपमा, तपाईंलाई थाहा छ, स्वायत्त वाहनहरूको साथ त्यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रभाव हुनेछ। तर दिनको अन्त्यमा, मानव अझै प्रभारी छन् र हामीले यस प्रक्रियालाई राम्रोसँग प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ।
चेरिल क्रेन: यसले हामीले खोज गरेका कुराको पुष्टि दिन्छ। मलाई लाग्छ कि यस विषयको वरिपरि सनसनीखेज वा भय उत्पन्न हुने भइरहेको छ। भर्खरको रेडियो अन्तर्वार्तामा जुन मलाई थियो भनेर मलाई सोधिएको थियो कि कम आयकर्मीका लागि अटोमेसन र रोबोटिक्सको अर्थ के हो।
र यो एक ठूलो प्रश्न थियो। र मेरो जवाफ यो थियो कि त्यहाँ रोजगारदाताहरूका लागि पुन: चलाउने र अपस्किल काम गर्ने अवसरहरू छन्।
त्यसमा तपाईका विचारहरू के छन्?
वक्ता:: मलाई लाग्छ कि यो महत्त्वपूर्ण छ। फेरि, यसको कारणले गर्दा मैले शिक्षालाई अँगाल्ने बारेमा कुरा गरिरहेको छु र तपाइँको कुराकानीमा नयाँ सीपहरू सिक्ने बारेमा। र मलाई लाग्छ कि के भयो, र धेरै व्यक्तिहरूलाई हुन्छ उनीहरूको क्यारियरको अवधिभरि नै तिनीहरू सोच्छन् कि मसँग अब अरू कुरा सिक्नुपर्दैन। तपाईलाई थाहा छ, मैले कलेज गरिसकें, मैले युनिभर्सिट गरें, मैले पढ्ने काम गरें खैर के अनुमान? २०१ In मा त्यो केस होइन। तपाई निरन्तर सिकिरहनु पर्छ। र यो व्यक्ति हो कि भविष्यमा सफल हुन को लागी सिक्ने। किनकि तपाईले भनेको कुरा ठ्याक्कै के हुँदैछ त्यो हो हो, त्यहाँ केहि कार्यहरू छन् जुन स्वचालित हुन्छन् र तपाई कि त त्यहाँ आफ्नो डेस्कमा बस्नुहुन्छ र स्वीकार्न सक्नुहुन्छ, हे, तपाईलाई अब आवश्यक पर्दैन। वा तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाइँलाई थाहा छ, म कसरी यो अटोमेसनको प्रशंसा गर्न सक्छु? मानवको रूपमा मसँग के सीपहरू छन् जुन मलाई व्यवसायको यस प्रक्रियामा अझै उपयोगी हुन अनुमति दिनेछ? तपाईंलाई थाहा छ, यदि तपाईं वित्तीय सेवा उद्योगमा हेर्नुभयो भने, लेखा परीक्षकहरूलाई हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण हो। त्यहाँ तिनीहरू के गर्छन् कि स्वचालित हुन सक्छ। जहाँसम्म संख्या र रिपोर्ट समीक्षा गर्न र अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न अझै धेरै रणनीतिक सोच छ। त्यो अझै पनी महत्वपूर्ण छ। त्यसोभए यदि तपाईंसँग ती मानवीय सीपहरू छन्, ती विश्लेषणात्मक कौशलहरू, त्यो चीजहरू, यसले लामो समय लिन सक्दछ जुन हाम्रो जीवनकालमा होइन मेशिनले बदल्नको लागि।
चेरिल क्रान: त्यो बिन्दुमा,aमा काम गर्दैccounting उद्योग, धेरै व्यवसायीहरूले गुनासो गर्छन् कि उनीहरूको अडिटर्स र उनीहरूको लेखाकार पर्याप्त रणनीतिक छैनन् कि उनीहरू केन्द्रित छन्, डाटा इनपुट।
त्यसोभए, यदि तपाईले डेटा इनपुट गर्ने मेसिनहरू पाउनु भयो भने, यसको मतलब यो सीप सेट अप परामर्श दृष्टिकोणमा स्तर अप गर्नु पर्छ, टास्क दृष्टिकोणमा होइन। र मलाई लाग्छ कि यो सबै भन्दा ठूलो मानसिकता परिवर्तन हो धेरै मानिसहरु लाई धेरै सहज महसुस बाट सार्न को लागी, आफ्नो काम क्षेत्र को आराम बाट बाहिर जाँदा र जाँदै, ठीक छ, मेशिनहरु गर्न सक्छन् कि। म के राम्रो गर्न सक्छु? सान्दर्भिक हुन र बढि मूल्य थप्नको लागि मैले कुन सीपहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ?
एम्बर म्याक: मलाई लाग्छ तपाईं ठिक हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ कि ती व्यक्तिहरू हुन् जसले अपस्किल कसरी बुझ्छन्, जसले बुझ्छन् कि उनीहरू रणनीतिक चिन्तकहरू हुनुपर्दछ। तपाईलाई थाहा छ सबैजना यस दिशातिर जान चाहँदैनन्, तर मलाई लाग्छ उनीहरूको रोजगार सम्भावित जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसोभए, तपाईंसँग अहिले २०१० मा शक्ति छ कि तपाईं यी सबै र त्योसँग कुन मार्गमा जान चाहानुहुन्छ भनेर निर्णय गर्न। र यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, मलाई लाग्छ लेखन भित्तामा एक किसिमको छ।
चेरिल क्रेन: सहमत छ - काम, कामदार, व्यवसाय मालिक, र मुख्य कार्यकारी अधिकारीको भविष्यका बारे बुद्धिको कुनै अन्तिम शब्द?
एम्बर म्याक: मेरो विचारमा कामको भविष्यका लागि दिमागमा राख्नुपर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये पहिलो एउटा कार्यबललाई बुझ्नु हो जुन हामी यसमा प्रवेश गरिरहेका छौं कि अर्को केही बर्षहरूमा क्षितिजमा छ। मैले हिजो एक व्यक्तिलाई भेटें जो एक प्रसिद्ध व्यापारी नेता हो जसले भन्छ कि उसले प्रत्येक हप्ता 30० घण्टा पोडकास्ट सुन्छ त्यसैले हामी कृत्रिम बुद्धिमत्तामा के हुँदैछ क्रिप्टोकुरेन्सीदेखि सबै कुरा माथि रहन सक्छौं। र म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि त्यो पहिलो चरण हो। मेरो मतलब, भविष्यमा बाँच्नको लागि कुनै प्रिस्क्रिप्शन छैन, तर हामी के जान्दछौं कि वास्तवमा तपाईको औंलाको टुंगोमा ज्ञान हुनु र पछि के हुँदैछ भनेर बुझ्नु भनेको तपाईले गर्नु पर्ने परिवर्तन गर्न बल प्रदान गर्दछ।
चेरिल क्रेन: धेरै धेरै धन्यवाद, अम्बर।
सँग जोड्नुहोस् सबै सामाजिक च्यानलहरूमा एम्बर र यहाँ अडियो संस्करण सुन्नुहोस् NextMapping.com